दिल्लीमा मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई दुईहजार जरिवाना – Nepali news portal
बैंक / सेयर
इजरायलमा कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण सुरु पहिलो चरण ८० जनामा खोपको परीक्षण आजै बाट शुरु ! मिलन नेवार र राजनराज सिवाकोटीको ‘ताल्चा लगाउ’ सार्वजनिक (भिडियो सहित) एसिडको घाउमा मायाको मलम विपन्न तथा गरिबको घरमा सरकार जूम भर्चुअल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम इजरायलमा गर्ने आज मिति २०७७, असोज २४ गते शनिबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
दिल्लीमा मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई दुईहजार जरिवाना
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १५:३२ November 19, 2020 पर्वत डेष्क
एजेन्सी÷भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना महामारीरूप लिएपछि सबैले मास्कको प्रयोगगर्न दिल्लीसरकारले अनुरोध गरेको छ । मास्क को प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई २ हजार रुपयाँ जरीवाना लिईने दिल्ली सरकारले जनाएको छ । यस अधि ५सय रुपयाँ जरिवाना तोकिएकोमा अहिले २ हजार रुपयाँ तोकिएको छ ।
यो घोषणा सीएम अरविन्द केजरीवाल आफैले गरेका थिए । उनले भने कि पहिले ५०० रुपैयाँ जरिवाना थियो तर धेरै व्यक्तिले अझै मास्क लगाएका छैनन, यसका कारण हामी जरिवाना दुई हजार रुपैयाँमा बढाइरहेका छौं ।
दिल्लीमा गत २४ घण्टामा मृत्युको नयाँ रेकर्ड सिर्जना गरिएको छ । पछिल्लो रात जारी गरिएको तथ्याङ्क अनुसार हिजो एक दिनमा १३१ व्यक्तिले आफ्नो ज्यान गुमाएको बताईएको छ ।
उही समयमा, ७ हजार ४ सय ४६ नयाँ केसहरू २४ घण्टामा दर्ता गरियो। मुलुकमा कोरोनाको तथ्यांक ८९ लाख ६० हजारको नजिक पुगेको छ । २४ घण्टामा ४५ हजार नयाँ घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ, जबकि उही समयमा, करीव ४९ हजार व्यक्तिहरू रिकवर भएको बताईएकोछ ।
हुम्लामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ को मृत्यु ,७ घाइते
चिकित्सा शास्त्र प्रवेश परीक्षा नहुँदा अन्योल
आज मिति २०७७, मंसिर २० गते शनिबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित
आज १२७२ जनामा कोरोना संक्रमण
लागूपदार्थको सूचीबाट गाजाँलाई हटाउनु पर्नेमा राष्ट्रसंघमा नेपालले गर्यो मतदान
मेलम्ची खानेपानी आयोजना : वितरण प्रणाली तयारी अवस्थामा
प्रचण्ड प्रस्ताब आरोपपत्र र सत्तास्वार्थ होईन– सुदिप कुँवर, नेकपा नेता
मेष - चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
ध्यान र आत्म-बोध लाभदायी साबित हुनेछन्। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ - जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। साथीहरूसँग साँझमा भेटघाट गर्नाले खुशीयाली साथै केही छुट्टी योजना बनाउनको लागि राम्रो हुनेछ। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक-अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई लिएर कुराहरू आश्चर्यजनक तरीकाले तपाईंको पक्षमा आउन सक्छन्।
बृष - इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। उचित संवाद र सहकार्यले जोडीसंगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
मिथुन - का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् - ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। कसैका लागि - परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। एकतर्फे मायाप्रीतिले तपाईंको मुटु मात्र दुख्नेछ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज तपाईंको आफ्नो जोडीसित गम्भीर तर्क हुन सक्छ।
कर्कट - हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)
तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंको कमजोरीलाई अंगाल्नेछ। यसले तपाईंलाई खुशी महसुस गराउनेछ।
सिंह - मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)
तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईं आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भनेको सबैमा सहमत हुनुहुँदैन - तर तपाईंले उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। आँखाले सबै कुरा भन्छ, र आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित आँखा जुदाएर भावनात्मक बातचीत गर्नु हुनेछ।
कन्या - टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)
आफ्नो जाँगरको उत्थान गर्न तपाईंको मनमा एउटा उज्ज्वल, सुन्दर र महिमित तस्वीर बनाउनुहोस। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
तुला - र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)
आमाबाबुको बेवास्ता गर्नाले आफ्नो भविष्य बिग्रिन सक्छ। राम्रो समय कहिल्यै पनि लामो रहँदैन। मानिसका कामहरू ध्वनिको छालहरू जस्तै हुन्। माधुर्य वा कर्कश ध्वनि उत्पादन गर्न यी घुम्दछन्। तिनीहरू बीउ हुन् - हामीले रोपेको मात्र टिप्न पाउँछौं। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। चिन्ता नगर्नुहोस्, आज तपाईँको शोक बरफ जस्तै पग्लिन्छ। आफ्नो जोडीसित तपाईं आज फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ किनकि उनी यसको लागि योग्य छन्।
बृश्चिक - तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। जवानहरू संलग्न भएका गतिविधिहरुमा संलग्न हुने राम्रो समय हो। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
धनु - ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)
स्वास्थ्यलाई लिएर यो समय नीरस रहनेछ, त्यसैले तपाईं खाने कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ। आफ्ना छोराछोरीको समस्या समाधान गर्न केही समय बाहिर जानुहोस्। व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। तपाईं वरिपरि मानिसहरूले तपाईंको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने धेरै सम्भावना छ। बाहिरी मान्छको सल्लाह अनुसार केही नगर्नुहोस्।
मकर - भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)
शारीरिक वास्तविकता हेर्ने इच्छा भएमा तपाईंले आफ्नो विचार र ऊर्जा बाँट्नुहोस्। मात्र अन्दाजले कुनै कुरो हुँदैन। तपाईंसँग अहिलोसम्म भएको समस्या के हो भने तपाईंले प्रयास नगरेर मात्र इच्छा गर्नुहुन्छ। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक-अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। तपाईंले आफुलाई दुनियामा सबैभन्दा धनी महसुस गर्नु हुनेछ किनकि तपाईंको जोडीले तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नेछन्।
कुम्भ - गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)
आफ्नो उच्च आत्मिक शक्तिको बाबजुद तपाईं आज तपाईंसँग हुन सक्ने कसैको याद गर्नुहुनेछ। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। तपाईंको सहयोगको आवश्यकता पर्ने साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। प्रेमी जीवन आज विवादास्पद हुन सक्छ। तपाईंको अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमताले राम्रो लाभांश प्राप्त हुनेछ। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
मीन - दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। उचित प्रयोग गरेमा तपाईंको रचनात्मक प्रतिभा अत्यधिक आकर्षक साबित हुनेछ। तपाईं समूह गतिविधिमा सामेल हुनुभयो भने नयाँ मित्र बनाउन सक्नु हुनेछ। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंले केहि बाँट्न बिर्सिनुभएको कारण तपाईंसँग उनी झगडा गर्न सक्छन्।
दोलखा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा फैलिएको छ, ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग। यो दक्षिण एसियाकै ठूलोमध्येको एक म्याग्नेसाइट उद्योग हो। तर, देशको…
काठमाडौँ , चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आठ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी…
अनौठो शंखबज्ने शालिग्रामशिला
आज मिति २०७७, मंसिर ८ गते सोमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
आज मिति २०७७, मंसिर ९ गते मंगलबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
ओलीले प्रचण्डप्रति लगायो यस्तो आरोप
आज मिति २०७७, मंसिर १५ गते साेमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित
मध्य एशिया संबाददाता
सरिस्मा बराल उमा
संबाददाता तथा टिभी जर्नलिष्ट
बि बि खराल
संबाददाता तथा रेडियो जर्नलिष्ट
उप संबाददाता कार्यलय प्रमुख पर्वत
रूद्र मिडिया प्रा.लि. द्धारा संचालित
कम्पनी दर्ता नं : ९८६७१६/०७४/०७५
Click Here For Member Detail
© 2018-2020 @ buddhasandesh.com | Powered by 9849815297.